Kuleylka dawo ma u yahay xanuunka dhinaca maskaxda? | Wardeeq 24 TV
Home Barnaamij-yada Kuleylka dawo ma u yahay xanuunka dhinaca maskaxda?
Kuleylka dawo ma u yahay xanuunka dhinaca maskaxda?
Dadka qaba xanuunnada ka dhasha walwalka ayay tiradoodu aad usii badaneysaa.
Cilmi baareyaal billaabay daraasad cusub ayaa sheegay in ku qabeysashada biyo diirran laga yaabo inay dawo u noqoto walwalka iyo cudurrada uu sababo.
Kooxdan khubarada caafimaad ah oo ka socda Jaamacadda Lakehead ee dalka Canada ayaa doonaya inay si qota dheer u baadhaan saameynta ay caafimaadka maskaxda ku yeelaneyso yeelaneyso in qofka uu muddo dheer ku hoos jiro biyaha kulul ee tuubada
Tallaabadan ayaa timid kaddib markii tijaabooyin hordhac ah oo horay loo sameeyay ay muujiyeen suurtagalnimada in kuleylka uu noqdo dawada mustaqbalka.
Daraasado hore ayaa lagu ogaaday in dadka qaba xanuunnada maskaxda ee uu keeno walka ay soo roonaadaan marka uu jirkoodu kulul yahay, xanuunka haya awgiis.
Daraasad kale oo natiijo fiican lagu helay ayaa muujisay in uu waxtar leeyahay kuleylka loo dhaweeyo qofka qaba cudurka walwalka, iyadoo heer kulka jirkooda la gaarsiiyay ilaa 38.3c.
Cilmi baadheyaasha ayaa soo tabiyay in 60% ka mid ah dadkii daraasadda ka qayb qaatay ay si fiican ugu roonaadeen dawada kuleylka, halka 40% ay aad ugu sii xanuunsadeen wareeggii koowaad ee cilmi baadhista.
Waqti xaadirkan, dawooyinka loo adeegsado xanuunnada dhimirka ee ka dhasha walwalka waxay isugu jiraan dawooyinka sida caadiga ah loo qaato iyo la talin.
Haddii lagu guuleysto in kuleylku uu dawo u yahay cudurkaas waxaa lagu tallaabsan doonaa horumar aad u weyn oo ku aaddan sidii dadka looga caawin lahaa xaaladaha ka dhasha walwalka.
Daraasadda cusub ee hadda la billaabay waxaa ka qayb qaadan doona 150 ruux oo dhammaantood qaba cudurrada dhimirka, walwalka ama dhibaatooyinka ka dhaxa naxdinta xad dhaafka ah.
Kala bar ka mid ah waxaa laga codsan doonaa inay lugaha galiyaan biyo kulul ayna ku hayaan ugu yaraan saacad badhkeed, iyagoo sidaas sameynaya isbuuciiba saddex jeer muddo dhowr bilood ah.
Inta kalena waxaa isla tijaabadaas loogu sameyn doonaa inay lugaha gishtaan biyo qabow.
Inkastoo xiriirka ka dhaxeeya kuleylka iyo xanuunnada dhimirka aan si buuxda loo fahmin, khubarada qaar waxay aaminsan yihiin in heer kulka sare uu kaalin weyn ka qaadan doono dadaalka loogu jiro helitaanka dawada ugu sahlan.
Barfasoor Carmine Pariante, oo ka tirsan waaxda caafimaadka dhimirka ee Macadka King’s College London, ayaa yidhi: “Waxaan ognahay in yarenta holaca gudaha ku shidan uu yahay tallaabo guul wanaagsan leh oo lagu caawiyo bukaannada qaba xanuunnada walwalka, kuwaasoo aysan waxba u qabanin dawooyinka hadda la yaqaanno.”
“Sidaas awgeed, aad bay u fiicnaan lahayd haddii la heli karo qaab dabiici ah oo kuleylka wax looga qaban karo xanuunkan, iyadoo aan la adeegsaneynin dawooyinka lagu yareeyo holaca ka shidan maskaxda dadka qaba xanuunka dhimirka.”
Previous article15 arrimood oo u fiican madax-xanuunka, gurigana aad ku sameysan karto
Next articleDowladda Tanzania Oo Sii Daysay Hoggaamiyayaal U Ololeeya Is-Maamul Gobaleed